I-canon yedijithali iyabuya, ngemuva kokumenyezelwa ukuthi ayikho emthethweni yi-European Union | Izindaba zamagajethi
I-canon yedijithali ibuyile, ngemuva kokumenyezelwa ukuthi ayikho emthethweni yi-European Union
Ngesikhathi sikahulumeni kaZapatero, i-canon yedijithali yaqala ukusebenza, intela eyayisetshenziswa kunoma iyiphi idivayisi ekwazi ukugcina okuqukethwe, noma ngabe ilandwe ngokungemthetho noma bekungokwakho okuqukethwe okwenziwe abasebenzisi noma izinkampani.
Ngemuva kokufika nokuhamba okuningi, uhlu lwezincwadi olwaqedwa ngo-2011 nokuthi ngoJanuwari wangonyaka odlule lwamenyezelwa njengembuyiselo ngokungemthetho ekusebenzeni ngo-Agasti 1 futhi ukusebenza kwalo kufana kakhulu nokwedlule, kepha kulokhu izinto ezihloselwe ukusetshenziswa ngobuchwepheshe ngeke zithintwe yile canon.
Ngenkathi i-canon isulwa, isinxephezelo esatholwa ngabadali bokuqukethwe saya kwisabelomali sezwe jikelele, ukuze bonke abaseSpain abajwayelekile, noma ngabe basebenzise imithombo yezokugcina yedijithali, kufanele bayikhokhe. Kusukela ngo-Agasti 1, i-canon entsha yedijithali izobandlulula phakathi kokusetshenziswa kwamadivayisi noma imikhiqizo ukugcina okuqukethwe uma kwenzelwa ukuzimela noma ukuthengisa, esinye sezizathu eziveze ukuvinjelwa kwayo.
1 Ngubani okhokhayo futhi ongayikhokhi imali
2 Yimaphi amadivayisi athinta i-canon entsha yedijithali?
Ngubani okhokhayo futhi ongayikhokhi imali
Bonke labo bantu noma izinhlangano ezinikezelwe emkhakheni wobungcweti futhi eziyigunyazayo, ngeke zikwazi ukuyikhokha le mali, kuyilapho abasebenzisi abajwayelekile bengekho abangakwenza ngaphandle kokuhamba nge-hoop futhi khokha imali esungulwe kudivayisiNgiyazi ukuthi ngikukhombisa esigabeni esilandelayo.
Abantu bemvelo abakhombisa ukuthi okokusebenza abakukhiqizayo kuzophinda kukhiqizwe kuphela phesheya futhi kBangacela ukukhululwa noma ukubuyiselwa imali yenani elikhokhelwe ngaphambili ngesikhathi sokuthenga.
Izinkampani ezisebenzisa imidiya yesitoreji ukudala amakhophi wesipele, kuzofanele badlule ebhokisini, into abangenayo ngisho namakhanda uma kubhekwa ukuthi okuqukethwe okugciniwe kungokwabo nokuthi ngeke kwabelwane nganoma yisiphi isikhathi.
Yimaphi amadivayisi athinta i-canon entsha yedijithali?
Phezulu ekuklelisweni kwenani eliphakeme kakhulu lokukhokhela i-canon yedijithali, ama-hard drive angaphandle ama-6,45 euros, ama-hard drive angaphakathi ama-5,45 euros, amaphrinta ane-scanner esihlanganisiwe ama-5,25 euros, alandelwa ngabaphrinta 4,50, amaphilisi ama-3,15 euros, amarekhodi e-DVD ama-1,86 euros kanye ama-smartphones 1,10. Izinsizakalo zokusakazwa komculo noma kwevidiyo azikathintwa yi-canon okwamanje, kodwa konke kuzosebenza.
Ngokusobala Ama-USB skewers, ama-CD nama-DVD, noma ngabe abhalwe kabusha noma cha nawo azophazamiseka yize kunjalo kancane, phakathi kuka-8 no-28 cents ngokulandelana ngeyunithi ngayinye. Kuze kube manje, izinsizakalo zokugcina amafu azikathinteki, kepha uhulumeni unenketho yokwengeza amadivayisi amaningi, imikhiqizo noma izinsizakalo ohlwini, into okungafanele isimangaze.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » I-canon yedijithali ibuyile, ngemuva kokumenyezelwa ukuthi ayikho emthethweni yi-European Union
IMotor Mod entsha yakwaMotorola ikuvumela ukuthi urekhode amavidiyo angama-360-degree